Vatungamiriri veNauru nePalau vakasaina ASA, mukana mutsva wekushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nauru Kupwanya Nhau » Vatungamiriri veNauru nePalau vakasaina ASA, mukana mutsva wekushanya
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Nauru Kupwanya Nhau • nhau • Palau Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Nauru nePalau inyika mbiri dzakasununguka muSouth Pacific Ocean.
Mukushanda pamwe chete vanhu veNauru vanozowana nyore kupinda kwete kuPalau chete, asiwo kuTaiwan nedzimwe nzvimbo munzvimbo dziri kure dzePacific Ocean.
Vatungamiriri veNauru nePalau vakasaina chibvumirano chemasevhisi emhepo (ASA) icho chaizoona kutanga kwekufamba pakati penyika mbiri dzeMicronesia nekupfuura, 2 Gunyana.
The Mutungamiri weNauru Lionel Aingimea inoti kusainwa kwechibvumirano kunoratidza hukama hwakadzama uye hushamwari pakati peNauru nePalau, "asiwo nedunhu diki reMicronesian."
"Kwete chibvumirano chevashandi vezvemhepo chete chinosimbisa kubatana pakati penyika dzedu mbiri dzezvitsuwa asi chinopa mukana wekuwedzera hupfumi hwehupfumi kune ese ari maviri nyika dzatinowirirana.
"Nauru yakazvipira kusimudzira basa rayo munharaunda yekufambisa mudunhu, mudunhu, nepasirese," akadaro Mutungamiri Aingimea.
Mutungamiri we Parau, Surangel Whipps, Jr, anoti nyika yake inotarisira kuzuva iro masevhisi emhepo achadzoreredzwa, achirangarira chiitiko che medivac muna 1987 panguva iyoyo, Air Nauru, chakadaidzira kudana kwekufambisa ndege kubva kuPalau kuenda kuManila.
“Sekureva kwezvitsuwa zvidiki uye nemakungwa makuru, chimwe chezvinhu… isu tinonzwisisa, pasina kubatana uku kune nyika yekunze, isu tiri vega, uye nguva zhinji tiri panyasha dzendege nemakambani angangodaro zvido zvavo zvinogona kunge zvisingaenderane nezvatinofarira, ”President Whipps vakadaro.
Anowedzera kuti kumisikidza ASA mukana wekuti "tishande pamwe chete sehama dzePacific" uye kuona Nauru Airlines ichiva mutakuri anobudirira nekusimudzira masevhisi kuvanhu.
Vatungamiriri vaviri vanoziva mikana iyo mumwe nemumwe aanogona kupa mukubatanidza Asia, kumadokero, nekumaodzanyemba.
Zvichakadaro, Nauru iri kutora matanho epamba kusimudzira nendege dzenyika nekubatana kwemahara.
Chiteshi cheNauru chiri kukwidziridzwa kuti chizadzikise zviyero zvepasi rose nepo Nauru Airlines 'ichangotenga ndege yeBoeing 737-700 ichatora nguva dzakareba dzendege, ichisvika kune dzimwe nzvimbo.
Basa rekugadzirira ririkuenderera mberi kumutsiridza nhandare yendege iyo inosimbisa kuchengetedzeka kwendege uye kutevedzera uye nekumisikidza Nauru yekuwedzera chiitiko chekufambisa nendege mune ramangwana.
Chibvumirano ichi chinoti Nauru nePalau vanoziva nezvehukama hwepedyo hunosunga nyika mbiri idzi, uye chishuwo chavo chekupa hwaro hwekuitisa masevhisi emhepo.
Nyika mbiri idzi zvakare dzinoona danho rakakosha rekufambisa nendege dzenyika dzese mukusimudzira kwakasimba kwehupfumi hwezvitsuwa, uye kunyanya kuburikidza nekusimudzira kwekutengeserana, kutengeserana uye kushanya.
Nyika mbiri idzi zvakare dzinoziva nezve kudiwa kwekuvandudza mwero, mhando, uye kugona kwemasevhisi ekufambisa nendege mukati nekunze kwenyika dzadzo.
Mutungamiri Aingimea vakaratidza kutenda nemoyo wese kumutungamiriri wenyika VaWhipps vakamiririra hurumende nekufambisa kwenyasha kwazvino kwakatakura varwere 34 veNauru uye vanoendesa kuTaiwan kubva kuNauru negadziriro yehunyanzvi muYap State yekuwedzera mafuta.
Dambudziko rekuwedzera mafuta raireva kuti vashandi vengarava uye vafambi vaida kurara, uye Palau, ichishongedzerwa zvirinani nezvokugara uye zvinodiwa nendege, yakabvisa ndege pamwe nevakwiri vayo-vakabayiwa nenjodzi kumhara nekupedza husiku, vasati vaenda kuTaiwan.